Dowlada Puntland oo ku dhawaaqday xiliga doorashada duqa degmada Boosaaso. – SBC
Dowlada Puntland oo ku dhawaaqday xiliga doorashada duqa degmada Boosaaso.
Dowlada Puntland ayaa si toos ah ugu dhawaaqday xiliga ay dhaceyso doorashada Duqa degmada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo mudo 2 sano ah aysan laheyn degmada Boosaaso gole deegaan .
Wasiirka Wasaarada Arimaha gudaha iyo Horumarinta Reer Miyiga ee Dowlada Puntland Gen C/Laahi Axmed Jaamac Ilka jiir oo ka hadlayay munaasabad maalin nimadii shalay lagu dhaarinayay xubnaha golaha deegaanka Boosaaso ayaa sheegay in ay doorashada Gudoomiye nimada dhicayso 16da bishan oo ku began maalinta Beri ah.
Ilka Jiir wasiirka arimaha gudaha Puntland ayaa ku nuux nuuxsaday Ahmiyada ay leedahay sameynta golaha deegaanka si ay u soo doortaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkiisa, isagoo carabka ku dhuftay in Mashruucyo badan oo ku socday degmada Boosaaso ay u baaqdeen gole la’aan .
Ku dhawaaqista xiliga gudoomiye nimada degmada Boosaaso ayaa ku soo aadeysa iyadoo la dhaariyay xubnihii golaha deegaanka Boosaaso, waxay sidoo kale ku soo beegmeysaa xili in ku dhow laba sano ay degmadu aheyd mid maamulkeedu ku aadanaa kumeel gaar, ka markii lakala diray golihii deegaanka ee uu gudoominayay Duqii hore ee degmada C/saaq Xareed Ismaaciil.
waxa ah duqa xassan cabdale kuxigena waxa weyeen cabdirashid alore 2 rer aya laha bosaso awalba